ဥပဒေ | Burma Muslim
Category Archives: ဥပဒေ
By burmamuslim on February 3, 2014 | Leaveacomment
၂၀၁၄-သန်းခေါင်စာရင်းကောက်တဲ့အခါ `ရိုဟင်ဂျာ´ မ ထည့် ဘဲ`ရခိုင် မွတ်ဆလင်´ ထည့် လျှင် အန္တရာယ် နှင့် ရင် ဆိုင် ရ လိမ် မည်။
By burmamuslim on December 23, 2013 | Leaveacomment
၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်တဲ့အခါ `ရိုဟင်ဂျာ´အဖြစ် မထည့်ဘဲ`ရခိုင်မွတ်ဆလင်´လို့ ဖြည့်ကြဖို့ စည်း ရုံးနေ တယ် လို့ သိရ တယ်။ တကယ့် အန္တရာယ်ပါ.
`ရခိုင်မွတ်ဆလင်´လို့ ဖြည့်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် ရခိုင်လူမျိုးအဖြစ်သာ စာရင်းဝင်သွားမှာဖြစ်တဲ့
အတွက် တနည်းအားဖြင့် ရိုဟင်ဂျာလူဦးရေစာရင်းကို depopulateဖြစ်အောင် လုပ်ပြီး
လူအများစုကို ဒုတိယတန်းစား နိုင်ငံသားအဆင့်မှာ ထားနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတာပါ။ မြန်မာ
ပြည်မှာ ရိုဟင်ဂျာဦးရေတစ်သန်းကျော်ရှိနိုင်ပေမဲ့တစ်ယောက် တစ်ပေါက်နဲ့ ရခိုင်မွတ်ဆလင်၊
ကမန်၊ ဘင်္ဂါလီ၊ မြန်မာမွတ်ဆလင်စသဖြင့် ထည့်ချင် ရာ လျောက် ထည့်မယ်ဆိုရင် သန်းခေါင်
စာရင်းနောက်ပိုင်းထွက် လာမဲ့ လူဦးရေစာရင်းအရ `ရိုဟင်ဂျာ´ဆိုတာ လက်တစ်ဆုပ်စာပဲရှိ
တယ်ဆိုတဲ့ အနေအထားမျိုး ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုဖြစ်သွားရင် ကိုယ့်ရဲ့ ဆုံးရှုံးနေတဲ့ နိုင်ငံ
သား အခွင့်အရေးတွေ ပြန်လည်တောင်းဆိုရာမှာ အများကြီးထိခိုက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကို အထူး
ပေါင်း ကအစ (အင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်စေ၊ မြန်မာလိုဖြစ်စေ) တမျိုးတည်းဖြစ်အောင် စီစဉ်ထားနိုင်ဖို့
သန်းခေါင်စာရင်းမှာ ဖြည့်ရမဲ့အချက် ၄၁ ချက်ရှိတဲ့ထဲက အချက်အလက် (၃) ခုကိုပဲ ကွန်ပျူတာ
စကင်ဖတ်ပြီး မှတ်တမ်းယူမှာဖြစ်ပြီး၊ အဲဒီအချက်(၃) ချက်ထဲမှာ`လူမျိုး´ ပါ ပါတယ်။ ဒါကြောင့်
ဒီအချက်က ဘယ်လောက်အရေးကြီးသလဲဆိုတာ စဉ်းစားမိကြမယ်ထင်တယ်။
Via U U Mhaw Sayar
Posted in: သတင်း, အထူး, ဥပဒေ
၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးရေနှင့်အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်း၊ အိမ် ထောင် စု မေး ခွန်း ပုံ စံ
By burmamuslim on December 8, 2013 | Leaveacomment
အောက်ပါလင့်တွင် မေးခခွန်းနှင့် အဖြေ ရေးထားသည်ကို ဖတ်ကြည့်ပါ။
သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူရေးဆိုင်ရာ မေး ခွန်း နှင့် အ ဖြေ များ
Posted in: သတင်း, အထူး, ဥပဒေ, ဆောင်းပါး
Genocide တွင် အဆင့်၈ဆင့် ရှိ၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျူး လွန် သော လူ မျိုး တုန်း သတ် ဖြတ် မှု
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်မှုမရှိ၊ ရှိခဲ့လျှင် မွတ်စ်လင်မ်များကို တွေ့ ရတော့မည်မဟုတ်ဟု အများက ပြောကြသည်။ Genocide မရှိကြောင်း ငြင်းသော်လည်း Genocide ဆိုသည်မှာ ဘာလဲ သိသူရှားပေသည်။ Genocide တွင် အဆင့်၈ဆင့် ရှိသည်။
၎င်း အဆင့်၈ဆင့်မှ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မည်သည့်လက္ခဏာများကိုတွေ့ နိုင်သည်ဆိုတာ အောက်တွင် သုံးသပ်ပြထားသည်။
1. Classification “မင်းတို့ ” “ငါတို့ ” စသဖြင့် ခွဲခြားခြင်းဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့် လူမျိုး၊ ဘာသာ နှင့်လိုက်၍ ခွဲခြားတတ်သည်။ ဥပမာ “German” နှင့် “Jew”၊ “Hutu” နှင့် “Tutsi” ခွဲခြားခြင်းဖြစ်သည်။ လက္ခဏာ – မင်းတို့ ကုလားတွေ၊ ငါတို့ ဗမာတွေ ဟူသော အသုံးအနှုန်းကို နေရာအများအပြားတွင် တွေ့ ရှိရသည်။
2. Symbolization အပေါ်ယံ အသွင်အပြင် အမှတ်အသားအပေါ် မူတည်၍ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာ နာဇီခေတ်တွင် ဂျူးလူမျိုးများကို ၎င်းတို့ ၏ ၀တ်စား ဆင်ယင်ပုံကိုကြည့်၍ ခွဲခြားခဲ့သည်။ ထို့ အပြင် အ၀ါရောင်ကြယ် တံဆိပ်ဖြင့်လဲ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ လက္ခဏာ – မွတ်စ်လင်မ်များကို မျက်နှာပေါက်၊ မုတ်ဆိတ်၊ ၀တ်ရုံဖြူ စသည်ဖြင့် ခွဲခြားသတ်မှတ်ကြသည်။ ၇၈၆ဟူသော တံဆိပ်ဖြင့်လဲ ခွဲခြားကြသည်။
3. Dehumanization အုပ်စုတစ်ခုသည် အခြားတစ်ခု၏ လူအဖြစ် ရပ်တည်မှု (humanity) ကို ငြင်းဆန်ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါအုပ်စုအား တိရစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းတတ်ကြသည်။ သတင်း စာ၊ ရေဒီယိုနှင့် မီဒီယာများမှလဲ ၀ါဒဖြန့် ခြင်းများဖြင့် ခံရသူအုပ်စုကို ခွဲခြားသတ်မှတ်သည်။ လက္ခဏာ – ဘုန်းကြီးများပင်လျှင် တရားဟောရာ၌ မွတ်စ်လင်မ်များအား တိရစ္ဆာန် များနှင့် ခိုင်းနှိုင်းကြသည်။ နိုင်ငံပိုင် သတင်းများမှလဲ ကုလားဟူသော အသုံးအနှုန်းကို သုံးစွဲခဲ့သည်။
4. Organization Genocide လုပ်ရန်အတွက် အထူးအဖွဲ့ အစည်းတစ်ရပ်ကို ဖွဲ့ စည်းကြသည်။ များသောအားဖြင့် လက်နက်ကိုင်တပ် (သို့ ) အကြမ်းဖက်သမားများ ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ကြိုတင် အကွက်ချ ကြံစဉ်မှုများ ပြုလုပ်ကြသည်။ လက္ခဏာ – စနစ်တကျ လေ့ကျင့်ထားပုံရသည့် ဘယ်ကမှန်းမသိရောက်လာသော ဒေါသထွက်နေသည့် လူအုပ်ကြီး၊
5. Polarization Genocide ကျူးလွန်မည့် အုပ်စုသည် မီဒီယာအားကိုးဖြင့် ၀ါဒဖြန့် ကြသည်။ အကြမ်းဖက် အုပ်စုသည် ကြားနေလူများ၊ ၎င်းတို့ ကိုဆန့် ကျင်သည့် အစွန်းမရောက်သူများ၊ လူ့ အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့ အစည်းများ ကိုလဲ တိုက်ခိုက်ကြသည်။ လက္ခဏာ – မွတ်စ်လင်မ်မကောင်းကြောင်းများကို မီဒီယာများမှ တစ်ဆင့် လုပ်ကြံချဲ့ ထွင်၍ ဖြန့် ကြသည်။ ၎င်းတို့ ကိုဝေဖန်သည့် ကြားနေသူများကိုလဲ ကုလားလော်ဘီဟု ဆိုကာ တိုက်ခိုက်ကြသည်။ UNHCR ကိုပင် ဦးတည်တိုက်ခိုက်မှုများ ရှိသည်။
6. Preparation အကြမ်းဖက်သူများသည် ၎င်းတို့ ၏ သားကောင်အား အမှတ်အသားများဖြင့် ခွဲထုတ်ကြသည်။ များသောအားဖြင့် လူမျိုး ဘာသာ အမှတ်အသားများ ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ၎င်းအမှတ်အသားများကို ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်ကြသည်။ အသေအပျောက်စာရင်းများလဲ တွေ့ ရသည်။ ၎င်းတို့ ၏ ပစ္စည်းဥစ္စာများကို ဖျက်ဆီးလုယူတတ်ကြသည်။ ထို့ အပြင် အကြမ်းဖက်ခံရသူများအား သပ်သပ်ခွဲ၍ ရွာအပြင်၊ ရပ်ကွက်အပြင်၊ camp များအတွင်း အစာငတ်စေရန် ထားတတ်သည်။ ယခုအဆင့်သည် Genocide Emergency အရေးပေါ်အခြေအနေအဖြစ် ကြေငြာရမည့် အဆင့်ဖြစ်သည်။ လက္ခဏာ – စတစ်ကာ အမှတ်အသားများဖြင့် မွတ်စ်လင်မ်အိမ်များကို ခွဲခြားကြသည်။ သံတွဲဖြစ်စဉ်တွင် ဘာသာရေးအလံပါ အသုံးပြုမှုရှိလာသည့်အတွက် အစိုးရပိုင်းကပါ လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဘာသာရေးအဆောက်အဦးများကို အဓိကထားတိုက်ခိုက်ကြသည်။ အသေအပျောက်များလဲ ရှိခဲ့သည်။ အိမ်များ၊ ဆိုင်များအတွင်းမှ ပစ္စည်းများ လုယက်ခံရသည့် မှတ်တမ်းများလဲ ရှိသည်။ အိမ်ခြေဆုံးရှုံးသွားသည့် မွတ်စ်လင်မ်များအား ဒုက္ခသည်စခန်းအတွင်း ထားရှိသည်။ အနေ အစား ဆင်းရဲမှုများလဲ ရှိသည်။ ပြန်လည်နေရာချထားပေးမှု ကြန့် ကြာနေသည်။
7. Extremination အမြစ်ပါမကျန် ဖျက်ဆီးသတ်ဖြတ်သည့် အဆင့်ဖြစ်သည်။ ကလေးသူငယ် သက်ကြီးရွယ်အိုများကိုပင် ချမ်းသာမပေး။ အကြမ်းဖက်သူများသည် ၎င်းတို့ သတ်ဖြတ်သည့် လူများကို လူဟုမသတ်မှတ်တတ်ကြပေ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် Genocide သည် ခုခံရာမှ တစ်ဖက်နှင့် တစ်ဖက် အပြန်အလှန် လက်စားချေ တိုက်ခိုက်မှုအသွင်သို့ကူးပြောင်းသွားတတ်သည်။ ဥပမာ Burundi ဖြစ်စဉ် လက္ခဏာ – အသက် ၉နှစ်မှ ၉၀ကျော်အထိ ကလေးသူငယ် သက်ကြီးရွယ်အိုများပင် သေဆုံးသူစာရင်းတွင် ပါဝင်ခဲ့ကြသည်။ သေသည့်သူများကိုလဲ ကုလားတွေ သေတာနည်းသေးဟု လူမဆန်သည့် အပြောအဆိုများကို တွေ့ ရသည်။
8. Denial Genocide ဖြစ်စဉ်များတွင်တွေ့ ရတတ်သော နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်သည်။ ကျူးလွန်သူများသည် အလောင်းများကို မြေကျင်းတူး၍ မြုပ်နှံကြသည်။ မီးရှို့ ၍ အလောင်းဖျော
မြန်မာနိုင်ငံလေယာဉ် အက်ဥပဒေအား ခေတ်နှင့်လျော်ညီစေရန် ပြင်ဆင်မည်
By burmamuslim on May 13, 2013 | Leaveacomment
လွတ်လပ်ရေးမရမီ ၁၉၃၄ခုနှစ်ကပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံလေယာဉ်အက်ဥပဒေအား ခေတ်နှင့်လျော်ညီအောင် ပြင်ဆင်ရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ သဘောတူ အတည်ပြုချက်ရယူပြီး ပြည်ထောင်စုအစိုးရရုံးသို့ တင်ပြသွားမည်ဖြစ် ကြောင်း လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
“ ဒီဥပဒေကိုခေတ်နဲ့ လိုက်လျော်ညီထွေမှုဖြစ်စေဖို့ရာ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာမြို့ပြလေကြောင်းအဖွဲ့ချုပ် (IC-AO)ရဲ့အကြံပြုချက်အရပါ ပြင်ဆင်ဖို့ လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်” ဟု လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးစီးဌာန (DCA)မှလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေး မှူး ဒေါ်နွယ်နီဝင်းကျော်က ပြောသည်။
အဆိုပါဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ(မူကြမ်း)နှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်ရုံးမှ ဥပဒေအကြောင်းအရ အကြံပြုချက်များရယူ ထားပြီဖြစ်ကြောင်း ရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ အကြံပြုချက်နှင့် DCA ၏ ထပ်မံပြင်ဆင်ချက်များ ပါဝင်သော အက်ဥပဒေ (မူကြမ်း) အား နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးသို့ တင်ပြခဲ့ရာသမ္မတ၏ ဥပဒေအကြံပေးအဖွဲ့မှ အကြံပြုချက်များ ပြန်လည်ပေးပို့ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“ ပြင်ဆင်မည့်ဥပဒေမှာ လေယာဉ်လိုင်စင်ကိစ္စ၊ လေယာဉ်မှူးတွေရဲ့ လိုင်စင်ကိစ္စ၊ လေကြောင်းပျံသန်းမှုကိစ္စရပ်တွေ၊ လေကြောင်းထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ လေဆိပ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိစ္စတွေ ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်” ၄င်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံလေယာဉ်အက်ဥပဒေအား ပြင်ဆင်၊ ပယ်ဖျက်၊ အစားထိုးဖြည့်စွက်ခြင်းကို ကိုးကြိမ်တိုင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“အကြမ်းဖက်မှုသည်မြန်မာ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို ထိခိုက်ကြောင်း ရှေ့နေဦးကိုနီဝေဖန် ထောက်ပြ”
By burmamuslim on April 24, 2013 | Leaveacomment
Posted in: အင်တာဗျူး, အထူး, ဥပဒေ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပါ ဘာသာသာသနာကို အလွဲသုံးစားမပြုရ ဥပဒေပုဒ်မများ
By burmamuslim on February 21, 2013 | Leaveacomment
နိုင်ငံတော်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာတော်ကို နိုင်ငံတော်၏ နိုင်ငံသားအများဆုံး ကိုးကွယ်ရာဖြစ်သော ဂုဏ်ထူးဝိသေသနှင့်ပြည့်စုံသည့် ဘာသာသာသနာဖြစ်သည်ဟု နိုင်ငံတော်က အသိအမှတ်ပြုသည်။
နိုင်ငံတော်သည် ခရစ်ယာန်ဘာသာသာသနာ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာသာသနာ၊ ဟိန္ဒူဘာသာသာသနာနှင့် နတ်ကိုးကွယ်သောဘာသာတို့ကို ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအာဏာတည်သောနေ့၌ နိုင်ငံတော်တွင် ရှိနေကြသော ကိုးကွယ်ရာဘာသာများဟူ၍ အသိအမှတ်ပြုသည်။
နိုင်ငံတော်သည် အသိအမှတ်ပြုထားသော ဘာသာသာသနာများကို တတ်နိုင်သမျှ ကူညီစောင့်ရှောက်မည်။
နိုင်ငံရေးကိစ္စအလို့ငှာ ဘာသာသာသနာကို အလွဲသုံးစားမပြုရ။ ထို့ပြင် လူမျိုးရေးကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဘာသာရေးကြောင့်သော်လည်းကောင်း တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်၊ တစ်ဂိုဏ်းနှင့်တစ်ဂိုဏ်း မုန်းတီးခြင်း၊ ရန်မူခြင်း၊ စိတ်ဝမ်းကွဲခြင်းတစ်မျိုးမျိုး ပေါ်ပေါက်လာစေရန် ရည်ရွယ်သော သို့မဟုတ် ပေါ်ပေါက်လာရန် အကြောင်းရှိသော အပြုအမူသည် ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်သည်။
ထိုအပြု အမူမျိုးအတွက် ပြစ်ဒဏ်ပေးနိုင်ရန် ဥပဒေပြဌာန်းနိုင်သည်။